यसपल्ट त मनै फाट्यो…? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
यसपल्ट त मनै फाट्यो…?
असार १२, २०७४- केही दिनअघि कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मासमेतको टोलीले मधेसको यात्रा गरिएको विवरण छापिएको छ । शर्माले लेख्नुभएको छ, मधेसमा ‘उनीहरू’ र ‘हामी’ भन्ने भावना विकसित हँुदै गएको छ, मधेस र राज्यका बीच मतभेदभन्दा पनि मनभेद बढेको छ । यो यस्तै हो भने यो खतरनाक संकेत हो । हामीले यस संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बाँकी मुलुक चुनावमय भएको छ । तर प्रदेश नम्बर २ मा भने आन्दोलन र चुनाव–स्थगन छ ।
सुधीर शर्माले भनेजस्तो मधेससँग हाम्रो मनभेद भइसकेको जस्तो लाग्दैन । मनभेद र मतभेदमा भाषाका दृष्टिले फरक छ । मतभेद मतैक्यमा पुग्छ । मनभेद भएको छ भने मिलाउन गाह्रो पर्छ । अरुणा लामाले गाएकी छन्— यसपल्ट त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो… । मधेस र पहाडको सम्बन्ध यस्तो मनभेदमा पुगेको छैन भन्ने मेरो अनुभूति छ । पहाड–मधेस अझै परस्पर पराई भएका छैनन् । मधेसका शीर्षस्थ नेताहरूको बिहेवारीदेखिन खानपान चाड–तिहारमा हामी एकअर्कासँग नजिकिँदै गएका छौं । मन फाटेको छैन । मत मात्र बाझेको हो— खुला समाजमा यो स्वाभाविक हो ।